HBD Saya U Ba Than – HlaMin
HBD Saya U Ba Than
From U Wynn Htain Oo (M72)
Happy birthday ပါဆရာ
ဒီနေ့ည၁၂နာရီကျော်တာနဲ့ဆရာဦးဘသန်းအသက် ၉၁နှစ် ပြည့်ပါပြီ
ဆရာ့မွေးနေ့ကိုအစောဆုံး Wish လုပ်ချင်လို့ အခုထဲကရေးလိုက်တာပါ
ကျန်တော်တို့ကဆရာ့ကို ဆရာကြီးလို့ ဘာလို့လဲတော့မသိ မခေါ် ဆရာလို့ဘဲခေါ်ပါတယ် တတန်းလုံးပါ မောင်မာဃဟာလူတွေကိုရာထူးဘယ်လောက်ကြီးကြီးမကြောက်တတ်သူထဲမှာပါပါတယ်
Mech72ရဲ့စောစောပိုင်းဆရာကန်တော့ပွဲတခုသိမ်ဖြူက စိတ်တိုင်းကျမှာလုပ်တယ် ကိုအောင်ထိုက်နဲ့ခင်တော့discountရလို့လုပ်တာ
လို့အစချီပြီးသကာလ ခေါင်းကိုတချက်အမော့ ဆရာဦးဘသန်းနဲ့မျက်လုံးခြင်းဆိုင်မိသွားပါတယ် ထိုခဏ၌စာသင်ခန်းထဲမှာမြင်ဘူးတဲ့အလွန်တရာတည်တဲ့အကြည့်ကြီးကိုပြန်သတိ လိုက်မိသည် ခဏရင်ထဲမှာဘာကြောင့်လဲမသိဒိန်းကနဲကိုအရမ်းလန့်သွားပါတယ် လန့်ရုံလန့်ရင်ကိစ္စမရှိ
ပြီးရင်ပြောမယ်ကို၀င်းထိန်ဦးဆရာက ‘ကို’ တတ်ခေါ်တိုင်းကျန်တော်နေရအရမ်းခက်ပါတယ် ဆရာကအဖေ့ထက်တနှစ်ဘဲငယ်တာ
နောက်နေ့မနက်ယောဆရာတော်ကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့ဆရာမွေးနေ့ပွဲမှာဆရာဦးထွန်းရွှေ့ကိုစာအုပ်တအုပ်နဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကို၀င်းထိန်ဦး ခင်ဗျား၆ယောက်ကဘယ်သူမလာသလဲ အဲလိုစာရင်းမှတ်ပြီးဆရာဥိးဘသန်းကိုပြန်ပြရတာ
ဆရာတို့ Winner Inn နားကမြေတွေအတော်များများက လက်ညိုးထိုးမလွဲဆရာတို့မိသာစုတွေပိုင်ကြတာကလား
From U Tin Myint (M80)
ဒီနေ့က ကျနော်တို့ဆရာကြီး ဦးဘသန်း အသက် ၉၂ နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့၊ ကျနော်တို့ရဲ့ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ ကြီးကို ဒီစာလေးနဲ့ ကန်တော့လိုက်ပါတယ်၊စည်းစနစ်ကောင်းလွန်းတဲ့ ကျနော်တိူ့ ဆရာကြီး (၁)ကျနော် ဆရာကြီးဆီက ကျောင်းသင်ပညာရပ်တွေကို လေ့လာဆည်းပူးခဲ့ရရုံမကဘူး၊ အလုပ်ကို ပီပြင်ကျနအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာပါ အတုခိုးလို့ရခဲ့ပါတယ်။
ဆရာကြီးသင်တဲ့ Strength of Materials SOM ဘာသာကို လက်ထောက်ဆရာငယ် အနေနဲ့တွဲရတုန်းက လုပ်ကိုင်ခဲ့ရတာတွေကို အခုထိ အမှတ်ရနေဆဲပါ၊ ဆရာကြီးက သူ့ SOM ဘာသာရပ်ကို အာအိုင်တီမှာ သင်ပြပေးနေတာနှစ်ပေါင်းမနဲတော့ပေမဲ့ စာသင်နှစ် အသစ်တိုင်းမှာ lecture synopsis အကျဉ်းချုပ် နဲ့ lecture ဖိုင် အသစ်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်၊ ( အဲ့ဒီ့ အချိန်တုန်းက တောင် lecture synopsis ရေးတဲ့ ဆရာတွေ သိပ်မတွေ့ရတော့ဘူး၊ အခုများတော့လေ ….) ၈၀ / ၉၀ ရာနှုန်းလောက်ပြန်တူတဲ့ ဒီ ဖိုင်တွဲတွေကို နှစ်တိုင်းအသစ်လုပ်နေတာကိုတော့ အစပိုင်းမှာ ကျနော် သိပ် သဘောမပေါက်ခဲ့ပါဘူး၊ နောင်ကျမှ တစ်ဖြေးဖြေးသဘောပေါက်လာခဲ့ရပါတယ်၊ ဆရာကြီးက သူ့ lecture ချိန်ကို ဘယ်တော့မှ ၊ ဘာအကြောင်းနဲ့မှ မပျက်စေပါဘူး၊ ကျနော့်ကို သူ့ lecture ခန်းထဲမှာ လိုက်တက်ခိုင်းပါတယ်၊ စာသင်နေတုန်း ပါမောက္ခချုပ်က အရေးပေါ် အစည်းအဝေးရှိလို့ လာခေါ်ရင် ကျန်တဲ့ အချိန်ပိုင်းလေးမှာ ကျနော့်ကိုဆက်သင်စေပါတယ်၊ ဆရာကြီး lecture ပျက်လို့ ကျောင်းသားတွေ ပျော်ခဲ့ရတာ ဘယ်တော့မှ မရှီခဲ့ရပါဘူး၊ ဆရာကြီးက သူ အစည်းအဝေးရှိတာကို ကြိုသိရင်တော့ ညဘက်ကတည်းက ကျနော့်ဆီကို အဆောင်မှူး တယ်လီဖုံးကနေတစ်ဆင့် သံကြိုးဆက်ပါတယ်၊ (ဆရာကြီးက ဖုန်းဆက်တယ်လို့ မသုံးပါဘူး၊) ကိုတင်မြင့် lecture နံပါတ် ဘယ်လောက်ကို ခင်ဗျား သွားသင်၊ ဒီ lectureက အရင်နှစ်က ၄၅မိနစ်နဲ့ မလောက်ဘူး၊ overshoot5မိနစ်၊ အရင်ဆရာ အခန်းထဲကနေထွက်တာနဲ့ ခင်ဗျား သင်ပုန်းဝင်ဖျက်တော့၊ ပြီး သင်ပုန်းနှစ်ချပ်စာလောက် lecture notes ကြိုရေးထားတဲ့၊ ခင်ဗျားက လက်ရေးနှေးတော့ ဒီလိုလုပ်ထားမှ၊ တော်ကာကျမယ်တဲ့၊ lecture ပြီးရင် ဘယ် နှစ်မိနစ် overshoot ဖြစ်လဲ lecture notes အောက်မှာ ပြန်ရေးလာပေးတဲ့၊ ဒါတွေက နောင်နှစ ဒီlecture ဘယ်သူသင်သင် သတိချပ်လို့ ရဘို့တဲ့။အချိန်မလောက်လို့ lecture မပြီးလာလို့မရပါဘူး၊ ကျနော်က နောက်တစ်ချိန်ကျ နောက် lecture နံပါတ်အသစ်ကနေ စသင်မှာဘဲတဲ့၊ အစပိုင်းမှာ မပီးမှာစိုးလို့ ချွေးသီးလုံးတွေပါကျရတယ်။ဆရာ့ လက်ထောက်ဘ၀မှာ အချိန်တိကျရုံလောက်နဲ့ မရ၊ ဝီရိရလဲကောင်းမှ၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကလဲ နောင်နှစ်အထိ၊ စိတ်မောလူမောဖြစ်ရပေမဲ့ မှတ်သားစရာကောင်းတွေ ရခဲ့ပါတယ်။
From U Hla Win (M73)
ဆရာကြီး ဦးဘသန်း ၏
သက်ရာကျော် တိုင် ချစ်တပည့်များ၊မိသားစု၊မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ
ချစ် တပည့်အပေါင်းမှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့အပ်ပါသည်။
From U Ye Lin Oo (M75)
Wishingavery happy and healthy 91st birthday to Sayargyi Prof U Ba Than. May you be healthy, joyful, peaceful, mindful and fulfilled with most of your best wishes.
Actually Sayargyi U Ba Than used to invite us on every 2nd October to the “Yaw Sayardawgyi Monastery, Bahan” for his birthday Swan donation except last year due to Covid19 pandemic.
We pay our homages to Sayargyi from distance this time.Wishing you All the Best Sayargyi.
ယနေ့ သည် ကျေးဇူးရှင် ဆရာကြီး ဦးဘသန်း ( စက်မှု )​၏
ဆရာ / တပည့်များအမြန်ဆုံး ပြန်လည်တွေ့
Saya’s Soon Kyway in October 2016
by U Soe Aung (M/Auto70)
ကြ်န္ေတာ့္ဆရာျကီးဦးဘသန္းး၏ ေမြးေန ့ပဲြ
အလွဴ ၌ အမွတ္တရ 02/10/2016 ။
ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ နွင့္ ဦးအုန္းခိုင္တို ့လည္း
Sayagyi U Ba Than celebrated his 89th Birthday on October 2, 2019.
Attendees include Saya U Tin U (Saya U Ba Than’s elder brother), Saya U Soe Paing and Daw Saw Yu Tint.
Present by U Tin Htoon (A60) for Saya’s 90th Birthday
Include Bio, Photos, Articles and Greetings
Present by U Tin Htoon (A60) for Saya’s 91st Birthday